बुवालाई छोराको दोस्रो चिठ्ठी | Mechikali Daily
बुवालाई छोराको दोस्रो चिठ्ठी
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २९ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०६:५७
डा. ढाकाराम सापकोटा
बुवा, मैले गत वैशाखमा पठाएको चिठ्ठी पाएपछि धेरै खुशी हुनु भएको र माथिल्ला घरका मामासँग आजसम्म नखुलेका आँखा छोराको चिठ्ठीले खुलाइदियो भन्दै विगतमा कांग्रेसलाई भोट माग्नु ठूलो भुल भएको रहेछ भन्नु भएको कुरा सुन्दा खुशी लागेको छ । आजसम्म जसलाई आफ्नो ठान्नु भयो त्यसलाई चिन्न नसक्नु तपाईंको भन्दा पनि परिस्थिति नै दोशी छ । ढिलै भएपनि साँचो कुरा बुझ्नु भयो । कुरा बुझेपछि कांग्रेसको पछि लाग्न छाड्नु भयो । मलाई यसैमा गर्व छ । बुवा त्यो दिन मैले सबै कुरा कहाँ लेख्न पाएको थिएँ र ! तपाईलाई पत्र पठाएपछि यो देशमा नसोचिएको राजनीतिक गतिविधि भए ती सबैको नेतृत्व कांग्रेसको निर्देशनमा माओवादी केन्द्रले ग¥योे ? त्यस्ता के काम ग¥यो भन्ने बारे विस्तृत रुपमा लेख्दा लामो हुने भएको हँुदा छोटकरीमा भएपनि लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
बुवा, हजुरलाई थाहा नै छ सुरुमा स्थानीय निकायको चुनाव वैशाख ३१ गते एकै चरणमा गर्ने गरी मिति घोषणा भएको थियो । तर,सके चुनाव टार्ने नसके सार्ने लक्ष्यलिएर हिँडेको सरकार जति चुनावको मिति नजिक आयो त्यति नै डराउँदै गएको थियो । जता हे¥यो एमालेको पक्षमा जनलहर आइरहेको थियो । परिस्थिति हेर्दा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस चुनावमा बढारिने निश्चित जस्तै थियो । चुनाव भाड्ने कुरामा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको मधेसी मोर्चाले आफूले भने अनुसार संविधान संशोधन भए चुनावमा भाग लिने जाल फाल्यो । दुवैको उद्देश्य एउट ििथयो । जनताले सरकारको सक्कली अनुहार देख्दै गए, भित्री कुरा बुझ्दै गए । फलतःचुनावबाट भाग्नखोजेको सरकारलाई खवरदारी गरी रहे । त्यही भएर एक चरणमा गर्ने भनिएको चुनावदुई चरणमागर्ने भन्नपुग्यो । पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ माअनित्यसकोे एक महिनापछि जेठ ३१ गतेबाँकी रहेका १,२,५ र ७ नम्बर प्रदेशमा चुनाव गर्ने गरी मिति तोकेको थियो । तर ,त्यो मिति पनि दुई पटक सारेर असार १४ मा पु¥याएको छ । असार १५ मानु खाएर मुरी उव्जाउने समय हो । त्यस्तो बेलाचुनाव के उद्देश्यले राखियो भन्ने बारेमा धेरै आशङ्काहरु उब्जिएका छन् । यद्यपि जनता भने स्याखु र पलास्टिक ओढेरै भएपनि मतदान गर्न आतुर छन् । चुनाव छल्न र उम्कने बाटो खोजी रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनलाई निर्वाचनबाट भाग्न नदिन र तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन दवाब दिने उद्देश्यले एमालेले ३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराएको छ ।
बुवा पहिलो चरणको चुनावमा एमालेले धेरै ठाउँमा जितेको समाचार सुन्दा तपाईलगायत वरिपरिका इष्टमित्र सबै खुशीहुनु भएको जानकारी पाउँदा मलाई आनन्द लाग्यो । अझ रमाइलो पक्षत के थियो भने त्यो निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी मिलेर लडेका थिए । माओवादीले जनयुद्धका नाममा गाउँघरका सोझासाझा जनताको रगतमा होली खेल्यो । लाखौ बालबालिका टुहुरा भए । हजारौ दिदी बहिनी विधुवा भए । कति बुवाआमाको काख रित्तियो । सत्ताको उन्मादमा रहेको कांग्रेसले माओवादीविचार बोक्नेलाई आतङ्ककारी भन्दै निर्दोष नागरिकलाई जहा भेट्यो त्यही मा¥यो । माओवादीका नेताको टाउको ल्याउनेलाई इनामदिने घोषणा ग¥यो । प्रचण्ड र देउवाको स्वार्थ नमिल्दा १६ हजार नागरिक मारिए । ती मारिने देउवा र प्रचण्डका भाइभतिजा, सालासाली कोही थिएनन् । मरे त जनताका छोराछोरी मरे, जति पीडा भोगे तिनैले भोगे । देउवा र प्रचण्डलाई त्यसको कुनै प्रवाह रहेन । त्यसै भएर पछिल्लो समय यी दुई जनाको सम्बन्ध गाढा बन्दै गएको छ । पालैपालो सत्ताचलाउने,चुनाव पनि मिलेर लड्ने कुरामा पनि सहमत भएका छन् । गोलाकारभित्रको हसियाँहथौडा र रुख तीनका साझा चिन्ह छन् ।
जनताको रगतमा होली खेल्ने माओवादी केन्द्र र कांग्रेस दुवै सत्तामा छन् । प्रशासन तिनैका हातमा छ । राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै सक्नेलाई फकाउने नसक्नेलाई तर्साएरै भए पनि आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्दै आएका छन् । उनीहरुले गरेको काम नियम संगत भएनभन्दा प्रधानन्यायाधीसलाई महाअभियोग लगाए । जनताले कांग्रेस र माओवादीको नाङ्गो नाच हेरी रहेकाथिए । निर्वाचनजनताले मतदानगर्ने कुरा थियो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्ड पुत्री रेणुदाहाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकी साझा उम्मेदवार बनेकी थिइन । रेणुले हार्नु हुन्न भन्ने तिनको मान्यता थियो । रेणुले हार्नु तिनका लागि लज्जाको विषय थियो । त्यसैले रेणुलाई चुनाव जिताउन देउवा र प्रचण्ड हेलिकप्टर लिएर चितवन पुगे । केन्द्रदेखि जिल्लातहको नेतृत्वमा रहेका कतिलाई पद दिए त कतिलाई आश्वासन दिए । माओवादीको जनयुद्ध र शेरवहादुरको तीन कार्यकाल देखेका जनताका लागि तिनले बाँड्ने कुरा केही थिएन । हुन पनि जनताले तिनलाई विश्वास गर्नेकुनै आधार बाँकी थिएन । फलतमतदानका बेला चितवनका जनताले विबेक प्रयोग गरे सूर्य चिन्ह माभोट हाले । रेणु दाहाल हार्ने निश्चित भएपछि मतगणनमा बसेका माओवादी केन्द्रका ऐजेन्टले मध्यरातमा मतपत्र च्याते । जुन घटनाले सिङ्गो नेपाली समाजलाई लज्जित बनायो तर कांग्रेसले खुशीयाली मनायो । जनताले दिएको मतच्यातेर नियम र कानूनको मात्र होइन मतदाताहरुको ठूलो अपमान ग¥यो ।
बुवा हजुरलाई थाहा नैछ, संविधान अनुसार हाम्रो गाउँ संघीय प्रान्त अन्तर्गत ५ नम्बर प्रदेशमा पर्छ । जनताको भावनाअनुसार मिलेर बनेको यो प्रदेशलाई तराईमा चुनाव हारेका मधेसी नेताहरुले कसैको उक्साहटमा पहाड र तराई छुट्याउनु पर्छ भन्ने माग राखे । तिनैलाई खुशीपार्न प्रचण्ड र देउवाले लागेपुगेसम्म टुक्क्र्याउन खोजे । जुन काम त्यहाँका जनताको भावना विपरीत थियो । त्यसका विरुद्ध ठुलो आन्दोलन गर्नु प¥यो । त्यो आन्दोलनमा तपाई आफै घामपानी नभनी अनवरत रुपमा लागिरहनु भयो । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई आन्दोलनमा नजान उर्दी नै जारी गरेकाथिए । आज तिनै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकाहरुलाई भोट हालेर तिनका नेतालाई यो क्षेत्र टुक्क्र्याउन सजिलो पार्नुहुँदैन । मौकामा बिचार पु¥याइएन भने पछि पछुतो मानेर केही हुने छैन । ५ नम्बर प्रदेश अन्तर्गततराईको भुभाग प्रचण्ड र देउवाले राजेन्द्र महत्तो, महन्त ठाकुरको पोल्टामा हालिदिएर कालान्तरमा अन्त कतै पु¥याउन खोजेका लाई रोक्ने कामएमालेले गरेको थियो । उसले अडान नलिएको भए यो प्रदेशलाई क्षेतविक्षेत पार्ने थिए । यो सबै देख्दादेख्दै र भोग्दाभोग्दै पनि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई भोट दिनु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सरह हुनेछ ।
बुवायत्ति लेख्दैमा चिठी निकै लामो भयो, लेख्नु पर्ने अझै धेरै कुरा थिए । औचित्यहीन रुपमाल्याइएको प्रधानन्यायाधीस शुसीलाकार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । मध्यरातमा मतपत्र च्यातेपछि मतगणना होइन फेरि चुनाव गर्नुपर्छ भन्दै छन् । सत्ताका लागि नैतिकता र इमान सबै गुमाउन तयार हुने प्रचण्डले खुशीका साथ राजीनामा दिएर शेर बहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनेर भ्रम बाँडेका छन् । आफ्ना मान्छेलाई सरकारमा पठाउन नेताहरुका बीचमा तँछाडमछाड चलिरहेको छ । मधेसी नेताहरु माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको बुई चढेर काठमाडौमा बसेर चुनाव बहिष्कारको नाटक गर्न छाडेका छैनन । यी र यस्तै अरु पनि धेरै कुराका बारेमा लेख्नुथियो । जुन विषयमा तपाईले धेरै जिज्ञासा राख्नु हुन्थ्यो तर केही छैन चुनावमा भोट दिन म पनि घर आउने छु । त्यति बेला यी सबै विषयमा कुरा गरौँला । म आउँदासम्म चुनावी माहोल निकै अगाडि बढी सकेको हुनेछ । तपाई आफै पनिभोट माग्दै कति ठाउँमा पुग्नु हुनेछ । अवश्य, कुनै पनि राजनीतिक दल दुधले नुहाएका छैनन् । तर,सबै एकै किसिमका पनि छैनन् । यति बेला नेकपा एमालेले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द पारेको छ । सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर गाउँगाउँमा गएको छ । यस पटकलाई एमालेको सूर्य चिन्हमा भोट माग्नु होला ।
उही तर्पाइँको छोरा